ပိုက်ဆံမက်ရွှေမြန်မာ မမများ၊ညီမများ ဒါလေးကိုတော့ဖတ်ကြည့်ပေးပါ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပိုက်ဆံမက်ရွှေမြန်မာ မမများ၊ညီမများ ဒါလေးကိုတော့ဖတ်ကြည့်ပေးပါ…
ပိုက်ဆံမက်ရွှေမြန်မာ မမများ၊ညီမများ ဒါလေးကိုတော့ဖတ်ကြည့်ပေးပါ…
Posted by gwa toe on Jun 23, 2012 in Copy/Paste | 13 comments
မန်မာပြည်တွင် …အစ္စလန်ဘာသာပြန့်ပွားရန် များစွာအလားလာရှိသည်။ အစ္စလန်သာသနာများစွာတိုးတက် စေရန် အလွယ်ကူဆုံးနှင့် အသေချာဆုံးသောနည်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးများကို သိမ်းပိုက်ရန် ဖြစ်သည်။ အလုပ်အကိုင်အဆင်မပြေသော မူဆလင်ဘာသာဝင်တို့သည် မြန်မာပြည်သို့သွားကာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုပြီးလျှင် မြန်မာအမျိုးသမီးများကိုယူခြင်းဖြင့် အစ္စလန်ဘာသာဝင်ပြန့်ပွားစေရန် အားထုတ်သင့်သည်။ မြန်မာမများတွင် ကိုယ်ကျင့်တရားနည်းပြီး စောင့်စည်းမှုမရှိသောကြောင့် သိမ်းပိုက်ခြင်းဖြင့် သေချာလွယ်ကူသော အစ္စလန်သာသနာပြုနည်းကို သုံးရန်သင့်ပေသည်။
အို……. အစ္စလန်ဘာသာဝင်အပေါင်းသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ ကျွန်ုပ်တို့လူမျိုးများ အားလုံးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသည် အဆိပ်ပင်ဖြစ်ခဲ့ချေပြီ။ တတ်နိုင်သလောက်ခြေကုတ်ယူထားရပေမည်။ သည့်အတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့လူမျိုးများအာလုံး စည်းလုံးကြရမည်။ သွေးစည်းကြရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သည်နိုင်ငံမှအပြီးအပိုင် ထွက်ခွာသွားရသည့်တိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့၏ သွေးသားများသည် သည်နိုင်ငံတွင်ကျန်ရစ်ခဲ့ရမည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတို့သည် အချိန်မရွေးငွေပေးလျှင်ရသော ပြည်တန်ဆာမများကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီး ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး လှုပ်ရှားဖို့အကောင်းဆုံးအချိန် ဖြစ်ပေသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတို့အား သင်တို့၏နှလုံးသားဖြင့်၎င်း ၊ငွေအားဖြင့်၎င်း မြူဆွယ်သိမ်းသွင်းရပေမည်။ အဓိကအချက်မှာ သူတို့၏ကိုယ်ထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏သွေးသားများကျန်ရစ်နေဖို့ပင်ဖြစ်ပေသည်။ သင်တို့၏ ကြိုးစားသမျှအမြတ်ကား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၏ ရင်တွင်းသို့ မိမိ၏သွေးသားဝင်ရောက်ကိန်းအောင်းသွားအေင် လုပ်နိုင်သူအား ဗလီမှ ကူပံ့ငွေ(၅၀၀၀)ဆုအဖြစ်လက်ဖွဲ့ပေးမည်။ ထို့ပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီး လေးယောက်၏ကိုယ်တွင်းသို့ သင်တို့၏သွေးသားများသွင်းနိုင်ခဲ့ပါက ဗလီမှလစဉ်(၁၀၀၀)ပေးသွားပါမည်။ဘွဲ့ရဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးဖြစ်က ဆုငွေ(၂၀၀၀၀)၊ အစိုးရအရာရှိသမီးဖြစ်ပါက ဆုငွေ(၂၀၀၀၀)၊ အစိုးရအရာရှိသမီးဖြစ်သည့်အပြင် ဘွဲ့ရပညာတတ်ဖြစ်ပါက ဆုငွေ(၅၀၀၀၀)တိတိကို ဆုအဖြစ် လက်ဖွဲ့ပေးမည်။
လူကိုလူဖြင့် ပျိုးရန် သင်တို့အားလုံး အထူးသတိပြုရမည်။သည်လို သိမ်းသွင်းနိုင်မှသာ အစ္စလန်ဘာသာသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဓွန့်ရှည်ကြာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက်သင်တို့ဘာမှပူစရာမရှိပါ။ အစ္စလန်ဘာသာဝင်ဖြစ်သော မူဂျာရစ်အစိုးရမှနှစ်စဉ် တစ်နှစ်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်စတာလင်ပေါင် တစ်သန်းကို ကျွန်ုပ်တို ကလက်ဝယ်သို့ပေးနေပါသည်။
(သင်တို့အောင်မြင်မှုအတွက် အလိုရှိပါလျှင် ဗလီများနှင့် အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပါ။)
(နှစ်၂ဝအတွင်းမြို့သည်မူဆလင်ဘာသာဝင်များသာဖြစ်ရမည်။ဗလီမှမူဆလင်လူငယ်များအားဖြန့်ဝေသည်။ )See More
By: အိန်ဂျယ် မမလေး
Like · · Follow Post · 17 hours agohttps://www.facebook.com/groups/217562615010847/
မြို့နာ မည် လေးတော့ ဖျက်ထားလိုက်ပါတယ် အောက်ပါတဲ့လ င့်ကလေးမှာဝင်ရောက် ဖတ်ရှူ နိုင်ပါတယ် သိသင့်သိထိုက်တယ်ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ မဆဲကြနဲ့ နော် MG ရွှာသားများအားလုံးကို လေစားစွာဖြင့် ဒီထဲမှာ တင်ဘို့ အတွက် တော်တော် စဉ်းစားခဲ့ပါ သေးတယ် အဆဲခံရရင်လဲ ခံပါ့မယ်ဗျာ ကျွန် တော် တော့ပြန်ဆဲမှာ မဟုတ်ပါ
ပိုက်ဆံပမာဏတွေကို ဖတ်ရပုံထောက်တော့ ၊ ကျုပ်တို ့ကြားခဲ့ဖူးတဲ့ ဟာ အမှန်ဘဲပေါ့ ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အခုလို website link လေးနဲ ့တင်ပေးတဲ့အတွက် ရှဲရှဲ။
အော် မမန်.တော့ ပါဘူးဗျာ…. သိသာလွန်းလို့….. let me ask u Mr gwa toe… what is ur point?
(မိုဟာမက်အလီစပက်) ဟဟဟဟဟဟ ဒီ နာ မည် ရှိရော ရှိရဲ့ လားဆိုတာ Arabic name မှာ ဒီ နာမည် မရှိပါဘူး….. …… facebook မှာ တွေ့တိုင်းသာ အမှန်ဆို ရင်တော့… ရင် လေး စရာ ပဲ
စိတ် ဓါတ် တွေ စိတ် ဓါတ် တွေ ……. အော် မြန် မာ လူမျိုး နဲ့ ဒီ စိတ် ဓါတ်… ကိုယ့်လူမျိုးဆိုတော့လဲ….. ရင် လေးတယ် ပဲ ပြောပါရစေ….. Let me ask u again what is ur point?
ဗလီတွေက ၊ ဒါမှမဟုတ် မွတ်စလင် ဘာသာဝင် တွေက ငွေပေးပြီး သူတို့ဘာသာဝင်ဖြစ်အောင် စည်းရုံးတယ် ဆိုတာ အမှန်ပဲဗျို့ ၊ ကျွန်တော် နဲ့ တော်တော်ရင်း နှီးတဲ့ လူတယောက်ဟာ ခု မိသားစုလိုက် မွတ်စလင် ဖြစ်သွားပီဗျာ ! ဒါကိုသူ့တူမ ယောက်ကျား ဗိုလ်မူး က မိသားစု ငွေကြေးခက်ခဲတာနဲ့ ဒီလို လုပ်ရမလားဆိုပီး ပေါက်ကွဲတယ် ထင်ပါရဲ့ တရွာလုံးက လူကြီးတွေ ဖိတ်ပီး ဆွေမျိုးစာရင်း ဖျက်တဲ့ အကြောင်း ကြေငြာ ပါရောဗျာ !
အဲဒါအမှန်တကယ်ဖြစ်နေတာ။ကြာလှပြီး။ဗလီဆိုတာ ဗန်းပြထားတာ။အဲ့ဒီဗလီထဲမှာ အမျိုးအကြံအစည်တွေထုတ်တယ်။စည်ရုံးရေးဆင်းတယ်။ငွေတွေထောက်ပံ့တယ်။အမျိုးသမီးက ပညာတတ်ရင်တတ်သလောက်ထောက့်ပံ့ကြေးရတယ်ဆိုတာလဲအမှန်ဘဲ။ရင်လေးစရာကောင်းတယ်။
ကြားနေတာတော့တော် တော်လေးကို နှစ်တွေကြာနေပါပြီ ဒီလောက်ထိတော့တိတိကျကျ မသိရသေးတာပါ
အင်း MG ကတော့ တင် ချင်တာ တင် တဲ့ tabloit သာ သာ ဖြစ်နေပြီ…… ရေးချင်တာသာရေး…. ဟေးလုပ်မဲ့ လူတွေ အများကြီး… ကိုယ်လုပ်တာ မှန်မှန် မမှန် မှန် သူများနစ်နာနာမနာနာ တာဝန်ယူစရာ မလို တော့ ပျော် စရာ ကြီးပေါ. ဘာ မှန်း မသိ ညာမှန်းမသိ… facebook ကိုသာလက် ဆွဲ ထား…. ကူးတင် ကူးချ ….ရေးသာတင်ကြပါကုန်….
မှန်မှန် လေး အားပေးပါ.မယ်….. စည်းကမ်းဆိုတာ ဘေးက column ထဲ မှာ ပဲ ရှိတာ…
honey phyo says:
အဲဒါဘယ်ခွေးသူတောင်းစားရေးတာလဲ အဲလိုုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်ဘာသာဝင်မှ နေလို့ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ဘယ်နိုင်ငံမှာ ဘယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေက အဲလိုမျိုးလုပ်တယ် ကြားဖူးလို့လဲ အစလာမ်ဘာသာမှာ ပိုတောင်မရှိပါဘူး
စောင့် ကြည့်သူ says:
ပြောစရာ မလို လောက်အောင် သိသာလွန်းတယ်
လက်တွေ့ ဘဝ ကို ကြည့် ။
မြန်မာမတွေလည်း မယူကျတော့ပါဘူး သူငယ်ချင်း တယောက်နဲ့ကားပေါ်မှာတွေ့လို့ သူငယ်ချင်းကပြောပြတယ် သူကြိုက်နေတာ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ ခရစ်ယာန် နဲ့တဲ့ ညီမကလည်းသူကိုပြန်ပြောမိလိုက်တယ် ခရစ်ယာန် ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘာလူမျိုးဘဲဖြစ်ဖြစ် ပါ ချစ်စစ်ချစ်မှန် ရင် တော့ကောင်းတယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုဖြတ်မယ့်သူမျိုးနဲ့မတွေ့ကျရင်ကောင်းမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ် မည်သည်ဘာသာမဆို ကောင်းရာလုပ်ရင်ကောင်းရာဖြစ်မယ် ဒါပေမယ့် မိမိဘာသာမိမိလူမျိုး မိမိမျိုးရိုးကို မပျောက်ပျက်အောင် ကိုယ့်ကိုးကွယ်တာက မြန်မာဗုဒ္ဓဖြစ်သည့်အတွက် ကိုယ့်မြန်မာ လူမျိုးချင်းဘဲ ချစ်ကြိုက် လက်ထက်သင့်ပေလိမ့်မည်ထင်မိပါသည် ။
မြန်မာမတွေလည်း မယူကျတော့ပါဘူး သူငယ်ချင်း တယောက်နဲ့ကားပေါ်မှာတွေ့လို့ သူငယ်ချင်းကပြောပြတယ် သူကြိုက်နေတာ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ ခရစ်ယာန် နဲ့တဲ့ ညီမကလည်းသူကိုပြန်ပြောမိလိုက်တယ် ခရစ်ယာန် ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘာလူမျိုးဘဲဖြစ်ဖြစ် ပါ ချစ်စစ်ချစ်မှန် ရင် တော့ကောင်းတယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုဖြတ်မယ့်သူမျိုးနဲ့မတွေ့ကျရင်ကောင်းမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ် မည်သည်ဘာသာမဆို ကောင်းရာလုပ်ရင်ကောင်းရာဖြစ်မယ် ဒါပေမယ့် မိမိဘာသာမိမိလူမျိုး မိမိမျိုးရိုးကို မပျောက်ပျက်အောင် ကိုယ့်ကိုးကွယ်တာက မြန်မာဗုဒ္ဓဖြစ်သည့်အတွက် ကိုယ့်မြန်မာ လူမျိုးချင်းဘဲ ချစ်ကြိုက် လက်ထက်သင့်ပေလိမ့်မည်ထင်မိပါသည်
မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ သတင်းဆိုတာ ထွက်မလာပါဘူး။ ဒီသတင်းကြားနေတာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ အစလမ် ဘာသာမှာ မရှိပါဘူးလို့ ဘယ်လိုအထောက်အထားနဲ့ ငြင်းမလဲ။ ဒါကို မဟုတ်ပါဘူးလို့ သက်သေပြချရင် အစလမ်လူမျိုးများ မည်သည့်ဘာသာခြားအမျိုးသမီး/အမျိုးသား ကိုမျှ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းမပြုရဆိုတဲ့ စည်းကမ်းနဲ့သက်သေပြမှယုံမယ်။ နင်တို့ဘာသာဟာ သန့်ရှင်းလှပါတယ်ဆိုရင် သက်သေပြရဲရမှာပေါ့။ အခုတော့ လူမျိုးပြန့်ပွားအောင်လုပ်နေတာ အသိသာကြီးကို လာမလိမ်ချင်နေကြနဲ့။